လူ့ဘဝ သုံးခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူ့ဘဝ သုံးခု
“မနေ့က”နဲ့ “မနက်ဖြန်”ရဲ့ တံခါးနှစ်ချပ်ကိုပိတ်ပြီး “ဒီကနေ့”တိုင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျော်ဖြတ်တတ်ရမယ်။ “ဒီကနေ့”တိုင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွတ် ဖြတ်ကျော်တာဟာ “ဒီတစ်သက်”ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဖြတ်ကျော်တာနဲ့ အတူတူဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကို တွက်ချက်တတ်ရမယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တွက်ချက်လေ ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်လေဖြစ်သလို မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကို တွက်ချက်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေ ရှိစေလေဖြစ်တယ်။
လက်လွတ်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားက အရင်ဆုံး “လက်လွတ်တတ်”မှ နောက်”ရမှာ”ဖြစ်တယ်။ လောကမှာရှိတဲ့အရာတချို့က လက်လွတ်တတ်မှ ပိုင်ဆိုင်ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လက်လွတ်ပြီးမှ ပိုင်ဆိုင်ရတယ်။ နည်းနည်းလေးမှ လက်မလွတ်တတ်ဘဲ အရာရာကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းက အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို လက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ကိစ္စမရှိဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောတတ်ရမယ်။ မှတ်ထားရမှာက အပြုသဘောဆောင်တဲ့၊ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ ပြဿနာတိုင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့၊ အခက်အခဲတိုင်းကို အောင်မြင်နိုင်တဲ့ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲ။
မိုးတွေ ဘယ်လောက်ကြီးကြီးရွာပါစေ၊ ဘယ်နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ရွာပါစေ…. မိုးစဲပြီး နေရောင်ဖြာမယ့်ရက် ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ထားရမယ်။ မိုးတွေအမြဲ မအုံ့နိုင်ပါဘူး။ မိုးအုံ့လိုက် နေသာလိုက်နဲ့ သဘာဝက ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဘဝဟာလည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။
(၁) သူတစ်ပါးကို ကူညီတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း
(၂) ရောင့်ရဲတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း
(၃) ပျော်စရာကို ရှာဖွေတတ်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း
တနည်းပြောရရင် အဆင်ပြေချိန် သူတစ်ပါးကိုကူညီပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာတတ်ရမယ်။
အဆင်သိပ်မပြေချိန် ရောင့်ရဲခြင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ရှာတတ်ရမယ်။
အခက်အခဲနဲ့ကြုံချိန် အခက်အခဲကြားထဲကနေ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ရှာတတ်ရမယ်။
မ…… နဲ့ (၃)ခု
(၁) တခြားသူရဲ့အမှားနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မပေးနဲ့။
လက်တွေ့ဘဝမှာ လူအများစုဟာ ပင်ပန်းဒဏ်ကို မကြောက်ကြဘူး။ သေမှာမကြောက်ကြဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ လေးတဲ့ဝန်ဖြစ်ဖြစ် ထမ်းရမှာ မကြောက်ကြဘူး။ ဘာအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ် မတွန့်ဆုတ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှားအယွင်း၊ မတရားခံရတာကိုတော့ မခံနိုင်ကြဘူး။ အမှားအယွင်း၊ မတရားခံရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့ တခြားသူလုပ်တဲ့ အမှားတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီတခြားလူလုပ်တဲ့ အမှားနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မပေးနဲ့။
(၂) ကိုယ့်အမှားနဲ့ တခြားသူကို အပြစ်မပေးနဲ့
ကိုယ်မတရားခံရသလို တခြားသူကိုလည်း မတရားဆက်ဆံတယ်။ ဒါဟာ တခြားသူကို ထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့နည်းတူ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပြန်ထိခိုက်နာကျင်စေတယ်။
(၃) ကိုယ့်အမှားနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မပေးနဲ့
လူကောင်းဆိုတာ ဘာလဲ? တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ကို အလုပ်(၁ဝ)ခု လုပ်ခိုင်းတယ်။ အလုပ် (၇)ခု (၈)ခုကို သူမှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါဆို သူဟာလူကောင်းဖြစ်တယ်။ ဒီစကားထဲမှာ နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး ဝှက်ထားတယ်။ လူကောင်းလည်း အမှားလုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လူကောင်းအမှားလုပ်တာ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲကြီးတဲ့ အမှားဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှားလုပ်မိတာနဲ့ အမှားရဲ့ရင်းမြစ်ကို ရှာတတ်ရမယ်။ ပြုပြင်တတ်ရမယ်။ သင်ခန်းစာယူတတ်ရမယ်။ ပြောင်းလဲတတ်ရမယ်။ ကိုယ့်အမှားနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မပေးနဲ့။ အဲဒီအမှားကို ဘယ်လိုပြုပြင် ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကိုပဲ ရှာဖွေပါ။